Igumbi leendwendwe elithokomeleyo, eliphakathi, ukukhwela intaba, ikhitshi elincinci. - I-Airbnb
Igumbi leendwendwe elithokomeleyo, eliphakathi, ukukhwela intaba, ikhitshi elincinci.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSiv & Paal
USiv & Paal yi-Superhost
Wamkelekile kwigumbi lethu leendwendwe elitofotofo. Ukufikelela kweyakho mini-ikhitshi labucala kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Ikhaya lethu likwindawo yokuhlala ekhuselekileyo nenoxolo, inomgama wemizuzu emi-2 kuphela ukuya elwandle. Ibekwe kwindawo esembindini, yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba kwisikhululo seenqwelomoya kunye ne-10 min yokuqhuba ukuya e-Ålesund.
Njengondwendwe lwethu, siyavuya ukuphendula nawuphi na umbuzo onawo malunga nendawo okanye indawo yokuhlala.
Igumbi lethu leendwendwe linebhedi enkulu, itafile encinci kunye nezitulo ezibini. Ikhitshi encinci ibandakanya ifriji, i-cook-top, i-waterboiler kunye ne-oven microwawe. Ibandakanya izinto ezisisiseko zasekhitshini, kukwakho nesinki enamanzi amatsha abandayo. Amanzi akhuselekile kwaye anencasa ukusela ngokuthe ngqo etephini.
Unokufikelela kwindawo yokuhlambela ekwabelwana ngayo, eneWC, isinki, ibhafu, ishawa kunye nobushushu bomgangatho.
4.84 out of 5 stars from 155 reviews
4.84 · Izimvo eziyi-155
Indawo yokuhlala ekhuselekileyo nenoxolo, kodwa isembindini kakhulu. Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya i-Ålesund kunye nesona sixeko sihle eNorway, i-Ålesund. Amathuba amahle okuhamba kuzo zombini ezi nakwiziqithi ezingabamelwane. Kwakhona ukusefa okuhle eAlnes, ekwisiqithi saseGodoya kumgama we-10 min xa uhamba.
Isiqalo esihle sokutyelela indawo! Iindwendwe zethu zihlala zityelela isixeko sase-Ålesund, eGeiranger, eTrollstien, e-Atlanterhavsveien (indlela yolwandle lwe-Atlantic), njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Siv & Paal
I (Siv) am a teacher, and my husband (Pål) is an optician. We enjoy living here on the westcoast of Norway, together with our 3 children and our miniature poodle Billy. We are an easygoing family who loves to travel.
Siyavuya ukunceda iindwendwe zethu nangayiphi na indlela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Giske